Madiridziro nembeu dzeSeedCo | Kwayedza
Madiridziro nembeu dzeSeedCo
19 Jun, 2020 - 00:06	 2020-06-19T00:23:22+00:00 2020-06-19T00:06:22+00:00 0 Views
Mai Edith Mutapu (veAgritex Macheke kubva kuruboshwe), Mai Esnath Muguza (sachigaro; kurudyi), VaTendai Chidewu (munyori) naKazembe Maocha murimisi weSeed Co vari mumunda wegorosi paHowgate Irrigation Scheme.
MUMWAKA uno wechando, varimi vane mukana wekudiridzira zvekuti rinongowe bishi kudyara mbeu dzemuchando.
Pambeu idzi ndipo panowanikwa mbeu yakakosha kunyika uye pasi rose – mbeu yegorosi (wheat).
Nekuda kwegoho riri kuwanikwa pambeu dzekambani huru pakuuchika mbeu munyika muno, yeSeed Co, varimi veminda midiki vave kutorima mbesa idzi gore negore.
Chinonyanya kunakidza ndechekuti kunyangwe zvichizivikanwa kuti varimi vendima diki vazhinji vanorima chikafu chekugutsa mhuri dzavo chete, vamwe vave kutoita mari nekuda kwegoho riri kubuda pambeu dzeSeed Co dzinoti SC Select neSC Nduna.
Mbeu yegorosi inokurudzirwa kudyarwa kubva pakutanga kwemwedzi waChivabvu (May) kusvika panopera vhiki rekutanga raChikumi (June) kuti murimi awane goho repamusoro, uye kutiza matambudziko ezvirwere pakutanga kwemwaka kana kunayiwa uko kunoderedza hunaku (quality) hwegorosi.
Kubata mwaka pakudyara gororosi kunobatsira zvakare kuti murimi agone kubata mwaka pachirimwa chinotevera muZhizha.
Nekukosha kwegorosi, Hurumende yakatara kukura kwendima dzichadyarwa chirimwa ichi padunhu rimwe nerimwe. Mashonaland East yakapihwa mwero wemahekita 12 000.
Howgate Irrigation Scheme iyo inowanikwa kwaMurehwa pedyo neMacheke yakatodyara ndima inosvika mahekita 55. Vane mbeu dzinoti SC Select iyo iri pamahekita 21 uye SC Nduna yavakadyara pamamwe mahekita 34.
Howgate Irrigation Scheme ndiyo yekumbotora mukombe weduhu pamakwikwi emadiridziro ekuMashonaland East mugore ra2017. Apa vakakumba mibairo mikuru kubva kumakambani, uye Seed Co yakahwinisa zvekare mibairo mihombe pachiitiko ichi.
Muhurukuro nasachigaro wepaHowgate, Mai Esnath Muguza pamwe chete nemunyori wepo VaTendai Chidewu, vanoti mukurima kwavo gorosi vakagona kuwana goho rematani masere pahekita nembeu yeSC Select, kunyangwe vaive nedambudziko rekushomeka kwemagetsi mumwaka yapfuura.
Chirimwa chegorosi chakakosha zvikuru kunyika sezvo chichipa hupfu (flour) hunoshandiswa pakugadzira chingwa, pasta, noodles, mabhisikitsi nezvimwe zvakawanda zvinodiwa zuva nezuva. Zvekare inogona kushandiswa kubika sadza uye ichibatsira paupfumi hwenyika sezvo ichiwanisa mari yekunze nemabasa kuruzhinji rwevanhu.
Howgate Irrigation Scheme yave kushandisa ruzivo rwamazuva ano pakudiridzira rwe”centre pivot”.
Kazembe Maocha murimisi (Sales Agronomist) kuSeed Co uye anobatika panhare dzinoti 0772 632 866